Dhacdadani waxaa loo duubi doonaa duulaanka ugu weyn ee ugu horreeya ama socdaalkii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee ka yimaadda bannaanka dooxada Niil oo ku aaddan bartamaha Afuraka, oo ay reer Yurub wax ku barteen ... Akhri wax dheeraad ah
Waa tan waxa Zulus, ee waddanka Mandela uu leeyahay: “Ma doonayno ajaanibta madow ee gurigeenna jooga. Iyagu waa burcadnimo u timid inay wax xadaan. Waa inay ku noqdaan ... Akhri wax dheeraad ah
Waa boqortooyadii Ashanti ee Gaana taas oo lagu muujiyey fiidiyowgaan iyadoo la raacayo xukunkiisa iyo sida munaasabadaha ciida (dabaaldega) ay uga dhaceen boqortooyada dhexdeeda. Ka dib gaar ahaan ... Akhri wax dheeraad ah
Sawir-qaadehan reer Ghana Joel Acheampong, wuxuu silcay illaa toddobadii sano, oo ahayd quadriplegia. Cudurkaan curyaaminta ah ee addimada afarta addin ee taabtay shil kadib shil ayaa ku kalifay inuu raad raaco wadada kaligiis. Akhri wax dheeraad ah